Swarmify - သင်၏စီးပွားရေးဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် YouTube ဗီဒီယို Embeds မသုံးရန်အကြောင်းရင်းလေးခု | Martech Zone
တနင်္ဂနွေ, မတ်လ 28, 2021 တနင်္ဂနွေ, မတ်လ 28, 2021 Douglas Karr
သင်၏ကုမ္ပဏီတွင်ဒေါ်လာထောင်နှင့်ချီ။ ကုန်လွန်ခဲ့သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဗွီဒီယိုများရှိပါကသင်သည် YouTube ၏ရှာဖွေမှုရလဒ်များ၏အကျိုးကျေးဇူးကိုယူရန် YouTube တွင်ဗွီဒီယိုများကိုလုံးဝထုတ်ပြန်သင့်သည်။ သင်သေချာအောင်လုပ်ပါ သင်၏ YouTube ကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ပါ ဗွီဒီယိုတွေရိုက်တဲ့အခါ အကြောင်းအရင်းအချို့ကြောင့် YouTube ကော်ပိုရေးရှင်းကို YouTube ကော်ပိုရေးရှင်းတွင်မထည့်သင့်ပါ။
YouTube သည်၎င်းဗီဒီယိုများ၏အသုံးပြုမှုကိုခြေရာခံသည် ပစ်မှတ်ထားကြော်ငြာခြင်း။ သင်၏ visitors ည့်သည်များ၏ရည်ရွယ်ချက်များကို Google နှင့်ဘာကြောင့်မျှဝေချင်ပါသလဲ။ သို့မှသာသူတို့သည်သင်၏ပြိုင်ဘက်များအတွက်ကြော်ငြာကိုတွန်းအားပေးနိုင်သည်။
သင်မေ့မထားလျှင်၊ သင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်များ၏သက်ဆိုင်ရာဗီဒီယိုများ မင်းရဲ့ YouTube player ပေါ်မှာ! သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုလာရောက်လည်ပတ်ခြင်း၊ သင်၏ဗွီဒီယိုကြည့်ခြင်းအားမြင်ယောင်ကြည့်ပါ၊ ထို့နောက်သင့်ပြိုင်ဘက်၏ဗီဒီယိုကိုသက်ဆိုင်ရာအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုအဖြစ်ပြသပါလိမ့်မည်။ Ouch!
ယုံချင်ယုံမယုံချင်ဘူး၊ YouTube ဟာတကယ်ပဲ အတော်လေးနှေးကွေး နှင့်ဗွီဒီယိုများသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အစမစတင်ပါ။ ဟေး ... အဲဒါအခမဲ့လား။ ကောင်းပြီ…ဖောက်သည်ကိုပိတ်ရန်ကြိုးစားနေသည့်စီးပွားရေးအတွက်မဟုတ်ပါ။ အင်တာနက်ပေါ်တွင်မြန်ဆန်ရန်ကုန်ကျစရိတ်လုံးဝရှိသည်။
ယူကျု့ရဲ့ဗီဒီယိုပလေယာကသိပ်ပြီးမများလှပါ စိတ်ကြိုက်... ရွေးချယ်ရန်အနည်းငယ်ရှိသည့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါ။ YouTube တွင်ကြည့်ပါ၊ ယူကျုးဘ်တွင်ဖွင့်ရန်လင့်ခ်ကိုနှိပ်ပါ၊ YouTube တွင်နောက်မှကြည့်ပါ၊ ဝေမျှပါသို့မဟုတ် play ကိုနှိပ်ပါ။ အားလုံးကသင့်အမှတ်တံဆိပ်အစား YouTube အတွက်အမှတ်တံဆိပ်ပါ။ ဘာကြောင့်အာရုံပျံ့လွင့်စရာမလိုဘဲအလုပ်လုပ်ရတာလဲ။
သင်၏ကိုယ်ပိုင် site တွင်လည်းဗီဒီယိုများတင်ထားခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်အကြံပေးသင့်သည်။ သင်၏ပုံမှန် web host တွင်ထောင်နှင့်ချီသော visitors ည့်သည်များအား power stream လုပ်ရန်အခြေခံအဆောက်အအုံမရှိပါ။ စင်စစ်အားဖြင့်သင်သည်အချို့သော download လုပ်ခြင်းခုံများကိုကျော်ဖြတ်ပြီးပိုမိုအားသွင်းရန်အခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုရှိသည်။ သငျသညျကျိန်းသေဗီဒီယိုအိမ်ရှင်ချင်တယ် ... YouTube ကိုမရ။
တစ်စက္ကန့်လောက်စောင့်ပါ အမြဲ သင်၏ဆိုဒ်တွင် YouTube ဗီဒီယိုများကိုထည့်ပါ။ ကောင်းပြီ, ရှေးရှေး, ဒီထုတ်ဝေ ... စီးပွားရေးလုပ်ငန်း site ကိုမဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်တော့ YouTube ကနေဗီဒီယိုတွေထည့်တာကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်။ ဒါကြောင့်တီထွင်သူများကလူများကြည့်ရှုရန်နှင့်ရယူရန်အတွက်နောက်ထပ်အမြင်များနှင့်အခွင့်အရေးများရစေသည်။ ကျွန်ုပ်၏စီးပွားရေးအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဗွီဒီယိုအချို့ပြုလုပ်ပြီးပါက၎င်းကိုကျွန်ုပ်လုံးဝလက်ခံလိမ့်မည် ဆွ.
နောက်ခြွင်းချက်တစ်ခုရှိတယ်၊ သင်က YouTuber ပါ။
SmartVideo ကို Swarmify: လျင်မြန်သော Video Hosting
Swarmify သည်သင်၏ကော်ပိုရိတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်အတွက်အားကောင်းသောမြန်ဆန်သောဗီဒီယို hosting ဖြေရှင်းချက်ကိုပေးသည်။ ဗီဒီယိုခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ပါ
CDN - သူတို့ကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရှိသည် အကြောင်းအရာပေးပို့ကွန်ယက် (CDN) ဆိုလိုတာကဗွီဒီယိုကိုတောင်းတဲ့လူတ ဦး နဲ့ဖြန့်ဖြူးနေတဲ့တည်နေရာကသိပ်နောက်မကျဘူး။
ကြားခံ-အခမဲ့ပြန်ဖွင့် - SmartVideo သည် Swarmify ၏မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်းငံ့ထားသည့်ပေးပို့သည့်ဖြေရှင်းချက်ကိုအသုံးပြုသည်။
စဉ်ဆက်မပြတ် Optimization ဗီဒီယို Streaming - ပြန်ဖွင့်ချိန်တစ်လျှောက်လုံး SmartVideo သည်အသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းစီ၏ဗီဒီယိုအတွေ့အကြုံများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်ပေးပြီး၎င်းတို့မတိုင်မီပျက်ကွက်မှုများကိုကာကွယ်ပေးသည်။
ကိရိယာကုဒ် - experience ည့်သည်များသည်အကောင်းဆုံးသောအတွေ့အကြုံများရရှိစေရန်သူတို့၏စက်ပစ္စည်းအတွက်ဗွီဒီယိုများကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်သည်။ စိုးရိမ်ပူပန်မှုကင်းမဲ့ပြီးကိရိယာအသစ်များအတွက်အလိုအလျောက် update လုပ်သည်
စင်ကြယ်သော, အာရုံ - အခမဲ့ကစားသမား - brand ည့်သည်များသည်သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းအားဖြင့်ရောင်းအား ပိုမို၍ ကုန်ပစ္စည်းနှုန်းလျှော့ချခြင်း။ logရာမအမှတ်တံဆိပ်များနှင့်ဆက်စပ်သောဗီဒီယိုများသည်သင်၏ဖောက်သည်များအားဖယ်ရှားရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
WordPress ကို Plugin ကို - scripts များနှင့် embeds များနှင့်ရှုပ်ထွေးနေစရာမလိုပါ။ SmartVideo သည်သင့်ကိုအလွယ်တကူပြေးနိုင်စေရန် plugin တစ်ခုရှိသည်။
စျေးနှုန်း - သင်၏ဆိုဒ်တွင်အရည်အသွေးမြင့်မားသောပါဝင်မှုများအတွက်သင့်ကိုအပြစ်ပေးသင့်သည်။ ထို့ကြောင့် SmartVideo ငွေတောင်းခံခြင်းသည် bandwidth မဟုတ်ဘဲဗီဒီယိုအမြင်များသာမဟုတ်ပါ။
အကယ်၍ ၎င်းသည်မလုံလောက်ပါက SmartVideo သည်သင်၏ဗွီဒီယိုများကို YouTube မှအလိုအလျောက်ရယူပြီး၎င်းကို encode လုပ်ပြီးသိမ်းဆည်းသည်။ ထို့နောက် YouTube player ကိုလုံးဝအစားထိုးလိုက်ပြီးသင်၏ဗီဒီယိုများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပေးပို့ကွန်ယက်ပေါ်တွင်တင်ထားပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အရှိန်မြှင့်ဖွင့်သည့်နည်းပညာမှတစ်ဆင့်ပေးသည်။
ထုတ်ဖော်: ငါအဘို့အမိတ်ဖက်တယ် SmartVideo Swarmify.
Tags: ကြားခံစီးပွားရေးဗီဒီယို hostingကော်ပိုရိတ်ဗီဒီယို hostingအစာရှောင်ခြင်းဗီဒီယို hostingနေပြည်တော်ချစ်တယ်ဗီဒီယို cdnဗီဒီယိုက encoding ကဗီဒီယိုအိမ်ရှင်ဗီဒီယိုကို hostingwordpress plugin ကိုYouTube ရွေးချယ်စရာ
ကြော်ငြာက ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ။ လူတွေက ဘာတွေဝယ်ကြတာလဲ။